Usuku My Pet » The 5 Big Dating Amaphutha That Women Yenza
Ingabe kokuba isikhathi okubi dating?
Ingabe kubonakala ukuba niqhubeke inqwaba nezinsuku futhi ukhulume eziningi amadoda inthanethi kodwa ungalokothi kubonakale ukuxhumana noma ukuhlangabezana umuntu wakho?
Uma kunjalo cishe wenza eyodwa noma ngaphezulu '5 Big Dating Amaphutha' kuba. Nanka 5 Big Dating Amaphutha ukuthi abesifazane benze, futhi yini ukwenza esikhundleni.
Ngakho abaningi besifazane zami amaklayenti buza nithandana nge-ajenda futhi ngempela usebenza ngokumelene nabo futhi ukuphumelela kwabo kanye dating. Bafuna umuntu yabo, futhi uma they cha bheka kuye manjalo kunoma yiziphi madoda nabo indoda Ufika sichithiwe ngokushesha futhi ukwesulwa ngaphandle ithuba ngolunye usuku ukuhlola uxhumano (noma ukuntula yalo) eminye. Futhi uma benza ukuya usuku esigabeni, owesifazane ithwala ukuthi ajenda yimanje yabo kanye nabantu esingaphansi ngokugculisayo.
Kungase kubonakale counterintuitive ukusho abanawo ajenda lapho nithandana, ngemuva konke ngokuqinisekile isizathu lonke thina zaphetha ukuhlangana 'umuntu wakho' right? Well yebo futhi akukho. Ekugcineni and eside lokhu isifiso, Nokho wena kakhulu ukunciphisa amathuba akho okuthola lelo sigaba uma uya nithandana nge-ajenda. Kulesi sigaba the game kungcono ukubuka dating for kuyini - ithuba ukuhlangabezana futhi kube azungeze wobulili obuhlukile ikhofi, uhamba, chatting nokunye. Wozani abantu - IT nje USUKU - hhayi interview wedding, kanjalo ake kancane kancane sika uphumule futhi aphathe kanjalo. Kuyinto esinjalo umbono akunangqondo ukulindela ukuthi ungakwazi wazi ukuthi umuntu othile wakho naye ukuphila kusukela komunye umhlangano in an setting yokufakelwa.
Uma wazi indlela yami ukuze nithandana abesifazane niyolazi I batusa nithandana njengoba therapy nesokulungisa amaphethini ezimbi ubuhlobo. Nokho ngaphezu le ukuphola kwakusho ukuba fun and ukukhanya yithemba. Uma uya nge-ajenda mayelana ukuthola uma lokhu umuntu wakho kwenza a ton of ingcindezi lonke isimo, futhi lokho kusho ukuthi wena noma usuku lwakho uzokwazi nokujabulela isipiliyoni. Ngeke ukwazi ukuba self yakho umhlabeleli futhi ingabe uzokwenza. Ngakho ukulahla ajenda kanye wenze enye entsha - ukuze babe new, nakho fun and ukukhanya ezithandayo nabantu ezintsha.
2. Rule Men Out Too Ngokushesha
Njengoba ne iphutha kuqala enkulu, iphutha 2 kungenye indlela abesifazane ukudubula ngokwabo unyawo lapho nithandana. Abesifazane abaningi entshonalanga emphakathini wanamuhla abuswa 'chemistry' abazizwa uma kuziwa ekwenzeni izinqumo zabo namadoda, futhi ngibona lokhu uzithola zonke izinhlobo zobunzima kaningi. Chemistry ivame ukuba kube inkomba abampofu ukuthi umuntu kungaba umlingani okuhle kuwe. Empeleni ngokuvamile chemistry edinga yisixwayiso for kwabesifazane abangakaze senziwe bakhulu ubuhlobo izinqumo esikhathini esidlule. Ngokuvamile la madoda angelusizo ungazithola ngokuphelele ukunganakwa ngoba banovalo and sezimiso ngalolo suku lokuqala futhi abazi Paka Punch in the emnyangweni chemistry. Ukuze abesifazane ukhule ukukhangana kungaba phezu isikhathi nomuntu omuhle. Ngakho lowo muntu kwambangela noma ethule elinye ithuba, Empeleni amnike eziningana dates short ubone uma engenzi uphume kwigobolondo ngawe futhi ibe umuntu ekhangayo, mhlawumbe ngisho 'nendoda yakho'. Ungakhathazeki ngokuthi ngabe ungabona ukuthi njengamanje (bheka iphutha 1).
3. Kukhumbule The Date With A Uhlu
Mistake 3 siyefana iphutha 1 futhi kulimaza ngendlela efanayo, uma kungekhona ukuthi sezizimbi. Ngiyazi ukuthi abesifazane abaningi babe ibukhali 'checklist' izimfanelo ukuthi bafuna (noma ucabanga bafuna) in a man. Akukho lutho olungalungile ukuthola esicacile ufunani ekahle umlingani wakho ladies, Nokho ake singene engokoqobo nohlu lwethu ngoba amanye awo umbhedo ngokuphelele futhi anibakhonzi nhlobo!
Uhlu isikhathi eside kakhulu futhi ngokuvamile has izinto khona ukuthi empeleni kungqubuzana ngokwabo! Ngokwesibonelo angase abe 'ezolile futhi ukuphumula' eduze 'inkanuko futhi eyingqabavu'. Manje Angikhulumi ethi ngeke ungaba zonke lezo zimfanelo oyedwa, kungcono nje ukuthi ngokuvamile umuntu ivame maqondana komunye. Ngakho okuyinto it? Futhi izinhlu zethu ngezinye izikhathi ube izinto ukuthi kukhona ezingatheni kangaka, ezifana 'emzimbeni,' noma 'imisipha'. Come on ladies! Akukho lutho olubi kokuba okuthandwa ngokomzimba kodwa ingabe ngempela uya ukukhetha kwakho partner ukuphila unethemba ink emzimbeni wakhe? Ucabanga ukuthi lokhu kuzoletha wena ubuhlobo best for impilo yakho? Kuthiwani ngezimfanelo ngempela ukuthi udaba, ezinjengokwethembeka, ukwethembeka, umusa, amandla (kwengqondo) njalo njalo?
Owesifazane ngamunye kumelwe anqume ukuthi imiphi kubalulekile kuye. Kodwa kaningi ngikubonile uhlu uphonswa ngaphandle uma ekugcineni owesifazane uhlangana umlingani wakhe ukuphila, futhi ngokuvamile ehluke ngophelele umuntu ayenakho ohlwini wakhe! Futhi uyajabula. Ngakho iseluleko sami - ukuxosha uhlu! Noma, uma kumelwe, uyowugawula lungene nje 5 izimfanelo okubaluleke. Sebenzisa njengesiqondiso jikelele NOT uhlu lokuzihlola.
4. Zama Too Hard
Ngakho ekugcineni wahlangana umuntu omthandayo, wena out on a date naye futhi uzizwa uthuka. Ngakho wenzani? You ukukhuluma. Uma kukhona igebe engxoxweni wena ugcwalisa it. You asikisela ukuthi uzoyaphi, wena dazzle naye ngezindaba ezethusayo of ezamehlela oye waba, bembonisa wit yakho elikhazimulayo futhi une kuye yaseZimbabwe phezu amahlaya akho. Futhi of course you thembisa ukukhokha ingxenye yakho usuku, noma mhlawumbe ngisho uthole yonke bill - ungowesifazane yesimanje emva konke. Futhi kuzoba OMKHULU! Yena laughing kanye nawe, futhi kukhona ukuxhumana, ungaziqhenya it. Kodwa, Ngemva kwalokho akaphindanga ubiza. Uya kubanda futhi ubalekela sekuhambe dates. Ngakho ukuthi konakalaphi?
Well amadoda abaningi bakhetha ukuthatha indima bendoda in dating, futhi uma nenza zonke noma kunoma ikuphi okungenhla empeleni baphokophelele kuye out of lokhu indima, okusho wena ndlela angabe useqala izimali kuwe. Ukuheha ukuzinikela imizwelo samadoda get Wakhutshwa lapho kufanele bafake ezinye umzamo. Ungase ucabange usuke ebukekayo futhi ziyakhanga Nokho ngeke kukusize kude in the eside namadoda iningi. Angase ujabulela isikhathi nawe, angase ukuhleka kanye nawe futhi kungase kube ngisho usuku lwesibili, Nokho cishe iwukuba sesenza omunye - omunye 'nzima' owesifazane eyona naye waba imizamo more.
Kudingeka ukuba lowo ehola ingxoxo, ukujabulisa wena futhi wasikisela okubanjelwe. Uma ufuna kushiya imizwa yakhe ezijulile mnike ahole futhi sibe namandla anele. Relax and ukuzijayeza wayekhona futhi ejabulela isipiliyoni esikhundleni.
5. Yiba An Ice Maiden
Ukuba i maiden kweqhwa side flip ukuba bazama kanzima kakhulu. Abanye besifazane bazi mayelana inombolo iphutha 4 futhi kanjalo bathatha ezinye extreme futhi babe ongangeneki futhi akutholakali. Nakuba kungase azitholi 'kanzima ukuze uthole' futhi 'value eliphezulu', uma kuthathwe kude kakhulu lendlela ongeza off ukuthi wena awazikhathaleli, akutholakali, akabonisanga bungane ngisho snobby. Kungaba bazizwa umkhuhlane kancane amadoda amaningi, futhi iningi lamadoda uyakunika pretty masinyane nge intombi ice, ngaphandle kwalabo abangamalungu nje nesithakazelo nenselelo jaha, futhi ungafuni lolu hlobo muntu njengoba eyedwa cishe ukulahla kuwe once jaha sesiphumile bese kwenye wesifazane.
Kukhona kudingeka kube nekulingana emkhatsini kokuba ukuphumula / eyitshela ahole futhi namanje abanentshisekelo kanye evulekile. Uma ungathola le balance ilungelo uzoba nesikhathi omkhulu nge dating. Into main ukukhumbula is kube nje wena. Thola strong ngempela ngaphakathi wena uthole ukhululekile isikhumba sakho siqu. Dating empeleni kungasisiza ngalokhu!
Ngakho hamba siphume futhi ngaphezu kwakho konke musa ukuthatha nithandana too uqobo. Ongeke wazi ukuthi kwenzekani for the omunye umuntu. Phatha it like fun 'practice' futhi kuyokusiza nawe.